ခမျြးဧအိမျ: July 2009
သို့ ..... လင်္ကာ
Posted by ချမ်းလင်းနေ at 8:23 PM2comments
ကဗျာဆိုတာ စကားတတ်စကလေးအရွယ်များ၊စာသင်ခါစ ကလေးအရွယ်များအတွက် အကောင်းဆုံးသော သင်ကြားမှုတစ်ခုဖြစ်ပါသည်။ကဗျာသည် ကလေးငယ်များအဖို့ ဆိုလွယ်၊တတ်လွယ်၊ရွတ်လွယ်သောကြောင့် သင်ကြားရ၊ရွတ်ဆိုရသော ကလေးများအဖို့လည်း ပျော်ရွှင်စွာရွတ်ဆိုရသော ကစားနည်းတမျိုးလည်းဖြစ်ပေသည်။ ထို့ကြောင့်လည်း ငယ်စဉ်ကလေးများ ဆော့ကစားရာတွင်လည်း ကစားမှုအတော်များများသည် ကဗျာဆန်ဆန်ရွတ်ဆိုကစားရသော ကစားနည်းများပေသည်။ကလေးများချော့မြှုရာတွင်လည်း ကဗျာကဲ့သို့သီချင်းရွတ်ဆိုမှုများသည် နားထောင်ရသောကလေးများအဖို့ သာယာနာပျော်ဖွယ်ဖြစ်စေသည်။ကျွန်တော်မှတ်မိသလောက်-
ကဲ့သိုသော သားချော့တေးလေးများဆိုလျှင် ငယ်စဉ်ကလေးဘဝအရွယ်က အမေဆိုပြခဲ့ဖူးသော ကဗျာလေးများပေတည်း။အမေဆိုပြသော သားချော့တေးကလေးများ နားထောင်ရင်း နှစ်ချိုက်စွာ အိပ်စက်ခဲ့ရသော တထောင့်တညရဲ့ ညများကို အခုနေများ တစ်ခါပြန်ကာလေ ရချင်မိပါသည်။
ဒီလို ကဗျာလေးတွေကို ကလေးများအပြန်အလှန် ရွတ်ဆိုကြရင်း အုပ်စုလိုက် ကစားကြတာကို တွေးရင်းငယ်စဉ်တောင်ကျေး ပျော်ပါးကစားခဲ့ကြ ပုံများကိုလည်း လွမ်းမိပါသေးတယ်။ရန်ဖြစ်ကြ ပြန်ချစ်ကြရင်းနဲ့ပဲ သူငယ်ချင်းတွေ တစ်ဦးနဲတစ်ဦး မာနကင်း အာဂတကင်း၊ တစ်ဦးပေါ်တစ်ဦး ဘာစိတ်မျှမရှိကြပဲ ပကတိ ရိုးသားသော ကလေးငယ်ဘဝပေတည်း။
စာသင်ချိန်ရောက်လို့ ကျောင်းစနေတော့လည်း ကဗျာဆိုတာ သင်ပုန်းကြီးစလှန်တာနဲ့ သင်ရတော့တာပါပဲဗျာ။
အ အမေတို့တိုင်းပြေ ငါတို့ချစ်တဲ့မြေ။
ကဲ့သို့သော ကဗျာလေးများကို ကျောင်းခန်းထဲမှသူငယ်ချင်းများနှင့်အတူတကွရွတ်ဖတ်ခဲ့ကြရသော စာအံသံများသည် ယခုထိတိုင်ကျွန်တော်နားထဲတွင်စွဲမြဲစွာကြားနေရပါသေးသည်။ ထိုကဗျာလေးများအထဲမှ ကျွန်တော်အကြိုက်ဆုံး ကဗျာလေးကတော့ -
ဒီကဗျာလေးကတော့ ကျွန်တော့်ရင်ထဲ အခုထိတောင် ဆိုလို့ကောင်းနေဆဲပါဗျာ။
နောက် အတန်းတွေကြီးလာပေမယ့်လည်း နှစ်စဉ်နှစ်တိုင်း မြန်မာစာ သင်ရိုးညွန်းတမ်းစာအုပ်ထဲမှာ "ကဗျာ" ကတော့မပါမဖြစ် အရေးပါသူလေ။ကဗျာဆိုတာကတော့ ကျောင်းသားဘဝမှာ ရွတ်ဆိုလို့ကောင်းရင် စိတ်ထဲစွဲကျန်ရောပဲလေ။ စာသင်ကျောင်းသားဘဝကတော့ သင်ခဲ့ရတဲ့ ကဗျာတွေကအများကြီးပါပဲ။တချို့ကဗျာတွေကိုတော့ အခုထိမှတ်မိတယ်။တချို့ကဗျာတွေကတော့ မေ့ပြီဗျာ။ကြီးတော့ စာတွေဘာတွေ ပြန်ဖတ်တဲ့အခါ တချို့ကဗျာလေးတွေကိုတွေ့မှ ဒီကဗျာလေးကတော့ ငါငယ်ငယ်က သင်ခဲ့ဖူးပါရဲ့ ဆိုပြီးပြန်မှတ်မိတာ။ငယ်ငယ်က သင်ခဲ့ရသောကဗျာရေးတဲ့ ကဗျာစာဆိုတွေထဲမှာတော့ လူဦးမင်း နှင့် ဖိုးသူတော်ဦးမင်းတိုနှစ်ဦးကိုတော့ အတော်ကိုကြိုက်မိပါရဲ့ဗျာ။ သူတို့နှစ်ဦးက တစ်ဦးက စာခံတဲ့ကဗျာကို တစ်ဦးက မရမကကဗျာဖွဲ့ပြီး စာအုပ်တော်မူကြတဲ့ တစ်ခေတ်ထဲပေါ်ခဲ့တဲ့ ကဗျာကဝိနှစ်ဆူပေကိုး။သူတို့ရေးတဲ့ကဗျာတွေထဲက ဒီကွမ်းအကြောင်းစပ်တဲ့ ကဗျာလေးကိုတော့ မှတ်မိသေးသဗျ။လူဦးမင်းစာခံတဲကဗျာမှာ-
ကိုင်း ထုံးဖြူ ၊ ပြည် ရှား
ဒီလို နန်းတော်တွင်းမှ ဘုရင်စားကာထွေးသည့် ကွမ်းအရောင်ကို ကြည့်ရင်းစပ်တဲ့ လူဦးမင်းရဲ့ ကဗျာကို ဖိုးသူတော်ဦးမင်းက တောဓလေ့ ရွာသူရွာသား သူဆင်းရဲများစားသော ကွမ်းအရောင်ဖြင့် ပြန်လည်ချေပကာ စာအုပ်ပုံကတော့ -
စကားပြောတတ်ခါစအရွယ်မှစ၍ စာသင်သားကျောင်းသားဘဝ၊ အတန်းတွေကြီးလာသည့်အထိ ကျွန်တော်တိုရဲ့ ပတ်ဝန်းကျင်တွင်လည်းကောင်း၊သင်ကြားခဲ့ရသော ကျောင်းစာများတွင်လည်းကောင်း ကဗျာသည် အတော်အတန်ပင် ထိတွေ့ခဲ့ရသည့် ကစားမှုအနေဖြင့်ရော၊ ပညာဗဟုသုတများအနေဖြင့်ရောပေးသောစာပေဖြစ်ပေသည်။
လူကြီးတွေဆိုသလိုပေါ့ ဂါထာပေး တေးဖြစ်တဲ့၊ ကဗျာပေးရင်ကော တေးဖြစ်မှာပဲလေ။ ကဗျာဆိုတာကတော့ တေးသီချင်းအစပဲပေါ့ဗျာ။ တေးတောင် သီဆိုမှုကောင်းလျှင် နားထောင်ကောင်းသလို ကဗျာဆိုတာလည်း အသံနေ အသံထားနဲ့ရွတ်ဆိုတတ်လျှင် အတော်ပင်နားဝင်ချိုမြလှပေသည်။ရွတ်ကောင်းဆိုကောင်းသော အထက်ပါ ကဗျာလေးများသည် ကျွန်တော်အဖိုတော့ ငယ်စဉ်တောင်ကျေးကလေးဘဝမှ အရွယ်ရောက်သည်တိုင် မမေ့နိုင်သည့် ကဗျာလေးများဖြစ်ပေသည်။တချို့ကဗျာလေးများမှာအမှားပါရင်လဲခွင့်လွှတ်ပြီးဖတ်ပေးကြပါခင်ဗျား။ဒီအကြောင်းတက်ခ်ထားတဲ့မနှင်းကိုရောစိတ်ကျေနပ်မည်လို့ထင်ပါတယ်။လာအကြောင်းကြားလို့ ကျေးဇူးပါဗျာ။ပထမဆုံးဈေးဦးပေါက်သော ကြောင့်လည်းကောင်း၊ ကဗျာတွေဖတ်ရတာ သဘောကျတဲ့သူအဖြစ်ကြောင့်လည်းကောင်း၊ စိတ်ပါစွာရေးသားနိုင်တာဖြစ်ပါတယ်။
Posted by ချမ်းလင်းနေ at 10:14 AM2comments
Labels: စုံစီနဖာ, တက်ခ်ပိုစ်
Posted by ချမ်းလင်းနေ at 11:14 PM 1 comments
Labels: သီချင်း, မေမေ
ဒီသီချင်းကိုကြားရင်ဖြင့်ဒီအရပ်ကသူတွေကတော့ ဘယ်သူဆိုတာလဲဆိုတာသိနေကြပေပြီ။မနက်ဆိုလည်းဒီအသံ၊ညဆိုလည်း ဒီအသံဘယ်လိုမှပင်မပြောင်းလဲနိုင်သောဒီအသံရှင်ကား
ဤရွာ၏ တစ်ဦးတည်းသောအဆိုရှင်စိန်မြတည်း။ကလေးများအခေါ်“အရူးကြီးစိန်မြ” ပင်ဖြစ်ပေ၏။စိန်မြဆိုလျှင်ဒီတရွာလုံးကလေးမှအစခွေးအဆုံးအကုန်သိ၏။ တနေကုန်တနေခမ်းရွာရိုးကိုးဘောင်လျှောက်သွားရင်းပါးစပ်မှလဲ အထက်ပါသီချင်းကိုကိုယ်ဆိုင်းကိုယ်ဗျောဖြင့်ပါးစပ်ဆိုင်းတီးရင်း အရပ်တကာလှည့်ဖျော်ဖြေနေတဲ့သူပေါ့။သူ့ခမျာဤရွာတွင်မိသားစုဝင်မရှိ၊ နေစရာနေရာအတည်အကျမနေပဲစိတ်ရူးပေါက်ရာလမ်းလျှောက်ကာရွာထဲ တလမ်းဝင်တလမ်းထွက်ဖျော်ဖြေနေတဲ့သူပေါ့။
စိန်မြကရူးသာရူးတာအရူးပါးဗျ။ရွာမှာဘုန်းကြီးကျောင်းအလှုရှိတယ်ဆိုရင် ဘယ်သူအလှုဖြစ်ဖြစ်စိန်မြကရှေဆုံးက။သူပါးစပ်ဆိုင်းကိုပိတ်ပြီးအလှုရှင်တွေ မြို့တက်ငှားလာတဲ့ဆိုင်းဝိုင်းရှေ့ထိုင်ရင်းနားထောင်ရတာအမော။အရှေဆုံးမှာ နေရာမရရင်ဘယ်တော့မှမထိုင်။ဘယ်သူထိုင်နေပလေ့စေဂရုမစိုက်။ ကလေးတွေနှင့်အပြိုင်နေရာလုတဲ့စိန်မြတည်း။တခါတလေနေရာမရမှာဆိုးရင် တနေကုန်ဆိုင်းရှေ့လာအိပ်နေတတ်သောအရူးပါးစိန်မြလေ။ ကလေးတွေကလည်းစိန်မြဟေ့ဆိုရင်အကုန်နေရာပေး၏။တညလုံးမိုးလင်းပေါက် အငြိမ့်ကြည့်၏။လူရွှင်တော်များရီစရာပျက်လုံးပျက်ရင်ဖြင့်သူနားလည်တာ မလည်တာအပထားတဝါးဝါးနဲ့သူအသံဝါကြီးနှင့်ရီနေတော့ပေ၏။စိန်မြမှာ အကျင့်ကောင်းတခုတော့ရှိတယ်။သူဘဝကသာဘာမှနားမလည်တဲ့အရူး။ ရွာကအလှုကိုတော့ဘယ်တော့မှပျက်အောင်တော့မဖျက်တတ်ပေ။တခါတရံ သူစိတ်ကောင်းရှိနေရင်ဖြင့်ထမင်းဟင်းဝိုင်းချက်ရာ၌ပင်ဝင်ကူသေး၏။ စိတ်လိုလျှင်ထင်းများပင်ဝိုင်းခွဲပေး၏။ပါးစပ်ဆိုင်းတီးပေးလျှင်ထ၍ကပြီး ထမင်းဟင်းချက်သူများကိုဖျော်ဖြေပေးလေ၏။ဒါကြောင့်မို့လဲရွာသူရွာသားများက စိန်မြရူးသာရူးတယ်ထူးတဲ့အရူးလို့ပြောစမတ်ပြုကြလေ၏။
စိန်မြကရွာထဲတွင်အလှုမရှိရင်လည်းသူ့ကိုဘယ်သူကထမင်းခေါ်ကျွေးကျွေး အလကားမစား။သူ့ပါးစပ်ဆိုင်းကလေးဖြင့်ထမင်းကျွေးသူအကြိုက် သီချင်းလေးများဖြင့်ဖျော်ဖြေပြီးကာမှထမင်းစာ၏။ဘယ်သူမှမကျွေးရင်လည်း ရွာရှိဘုန်းကြီးကျောင်းသွားပြီးကပ္ပိယကြီးသာလှထံသွားပြီး ဆွမ်းဟင်းအကျန်များတောင်းစား၏။စားပြီးရင်လည်းတံမြက်စည်းလေးယူကာ ကျောင်းဝင်းကျောင်းပြင်သူတတ်နိုင်သမျှလှည်းကျင်းပေးသွားတတ်သေး၏။ စိတ်ကောင်းဝင်နေရင်လဲသူများစွန်ကြဲထားသောအဝတ်ဟောင်းလေးများကို သေသေသပ်သပ်ဝတ်လေ၏။စိန်မြကရူးသာရူးပေမယ့်တခြားရူးသူတွေလို ထမင်းသိုးဟင်းသိုးဘယ်တော့မှမစားပေ။ဆရာတော်ဦးဝါယမဆုံးမလျှင်လဲ လိုက်မလုပ်ရင်သာရှိသည်အသေအချာတော့နားထောင်၏။ယဉ်ယဉ်လေးရူးသူ တမျိုးပေါ့။
အရူးဆိုတော့အမြဲတော့မကောင်းနိုင်ပေဘူး။အဲသူစိတ်ရူးဖောက်လာရင် ဘယ်အိမ်ကမှထမင်းမစား၊ဘာသီချင်းမှလဲမဆိုရွာပြင်ကကွင်းပြင်ထဲသွားပြီး တစ်ကိုယ်ထဲအော်လိုက်၊ငိုလိုက်၊ရီလိုက်ဖြင့်ရွာကပေးကမ်းထားတဲ့အဝတ်လဲ ကိုယ်မှာမကပ်ဗလာနတ္ထိဖြင့်ဟိုဟိုဒီဒီလျှောက်ပြေးနေလေ၏။ဒီလိုအချိန်ဆို တရွာလုံးစိန်မြသီချင်းသံမကြားရတော့ပေ။ဒီလိုသီချင်းသံမကြားရရင် ရွာသူရွာသားများကစိန်မြအရူးဖောက်နေပြီ။သုံးလေးရက်လောက် သူဘာထမင်းဟင်းမှမစားတော့ကြောင်းအားလုံးကသိနေပြီ။ဒီအခြေအနေမျိုးဆို စိန်မြကိုဘယ်သူခေါ်ခေါ်မရ။ဘယ်လိုပင်ထမင်းသွားကျွေးလည်းမစားတော့ချေ။ ဒါပေမယ့်စိန်မြကတခြားနေရာတော့မသွား။ဒီကွင်းပြင်ထဲမှာပဲတစ်ယောက်ထဲ လျှောက်အော်နေတတ်တာ။အဲဒီလိုစိန်မြစိတ်ရူးပေါက်လို့ဘယ်သူမှတားမရတယ်
ဆိုပေမယ့်ရွာကျောင်းဆရာတော်ဦးဝါယမကိုတော့စိန်မြမလွန်ဆန်နိူင်။အခုလဲ ရွာသားများလျှောက်ထားမှုကြောင့်ဆရာတော်ကိုယ်တိုင်စိန်မြအရူးပေါက်ရာ ကွင်းထဲကြွသွားပြီး
“ဟဲ့ စိန်မြ၊ စိတ်ငြိမ်ငြိမ်ထားစမ်း၊တယ် ငါတောင်မြွေးနဲ ရိုက်လိုက်ရရင် နင်နာသွားမယ်၊ ကဲ.. တိတ်တိတ်”
ဒီလိုဆရာတော်အသံ၊ဆရာတော်တောင်မြွေးမြင်ရင်ဖြင့်အရူးစိန်မြခမြာ ထိတ်ထိတ်ပြာပြာပင်မအော်ဝင့်ပဲဆိတ်ဆိတ်သာသာဖြင့်ဆရာတော်ခြေတော်ရင်း ဝပ်တွားရပေတော့၏။ဆရာတော်နောက်ကပါလာတဲ့ကပ္ပိယကြီးသာလှကလဲ အသင့်ယူလာတဲ့အဝတ်အစားတွေနဲ့အရူးစိန်မြကိုယ်ကို အရှက်လုံအောင်ဖုံးပေးရင်းဆရာတော်နောက်ကနေစိန်မြကိုတွဲခေါ်ရင်း ကျောင်းတော်ကိုပြန်လာခဲ့ရပေ၏။
ဒီလိုအရူးစိန်မြကိုဆရာတော်တစ်ပါးထဲသာနိုင်ရခြင်းအကြောင်းအရင်းရှိပေ၏။ ဘယ်လိုအကြောင်းလဲဆိုတော့ကာဒီစိန်မြရဲ့ဖြစ်ကြောင်းကုန်စင်ကိုသိသူကလဲ ဒီရွာမှာဆရာတော်အပြင်ဘယ်သူမှမရှိပေ။ဆရာတော်အပြောအရစိန်မြရဲ့ဘဝက အရင်တုန်းကဒီလိုအရူးတစ်ယောက်မဟုတ်ပေ။ဆရာတော်ရဟန်းအစ စာသင်သားဘဝနဲ့တခြားရွာမှာသီတင်းသုံးနေစဉ်အရူးစိန်မြရဲ့ဘဝဖြစ်စဉ်ကို
သိခဲ့ရပေ၏။ဆရာတော်ဒီရွာရောက်လာတော့လည်းခိုကိုးရာမဲ့သူရူးဘဝနဲ့စားရမဲ့ သောက်ရမဲ့ဖြစ်နေတာကိုမကြည့်ရက်တာနဲ့ပဲဆရာတော်ကိုယ်တော်တိုင် အရူးစိန်မြကိုဒီရွာအရောက်ခေါ်လာခဲ့တဲ့သူပေကိုး။သူဒီလိုဖြစ်လာရတာကလည်း သူပြုခဲ့တဲ့အကုသိုလ်၏အကျိုးကြောင့်နောင်ဘဝပင်မကူးပဲယခုဘဝမှာပင် လက်ငင်းအကျိုးပေးခြင်းကြောင့်ပေတည်း။
အချိန်ကတော့ဒုတိယကမ္ဘာစစ်မီးတောက်လောင်ပြီးစကပေါ့။ကိုစိန်မြ၊မမယ်လှ ဆိုလျှင်ဒီနယ်တကြောတွင်မသိသူမရှိပေ။ဒီနယ်မှလူအတော်ခပ်များများကလည်း ကိုစိန်မြတို့၏လယ်တွင်သူရင်းငှားလုပ်ကြရသူများဖြစ်ကြသလို၊ကြွေးမြီမကင်းသူများဖြစ်ကြ၏။ ကိုစိန်မြတို့မျိုးရိုးစဉ်ဆက်ဤနယ်တွင်သြဇာကြီးမားကြသူများဖြစ်၏။ကိုစိန်မြက မိဘဘိုးဘွားထံမှလယ်တွေ၊ကိုင်းတွေအများကြီးအမွေရထားသူဖြစ်၏။ သူ့အပြင်လည်းမည်သူမျှအမွေဆက်ခံမည့်သူလည်းမရှိ၊ဆွေမျိူးသားချင်း ညီအစ်ကိုမောင်နှမဆိုတာလည်းမရှိတစ်ဦးတည်းသောသားမို့ လူပျိုဘဝကတည်းကဆိုးချင်တိုင်းဆိုး၊ပွေချင်တိုင်းပွေစိတ်ရှိတိုင်းထင်တိုင်းကြဲနေလေ၏။
မမယ်လှဆိုရင်လည်းတစ်ဦးတည်းသောသမီး၊ငွေကြေးဆိုရင်လည်း ကိုစိန်မြတို့လောက်မချမ်းသာပေမယ့်အသင့်အတင့်ကြွယ်ဝ၏။ ဖခင်ရှိစဉ်ကတည်းကစက်ရှင်သူဌေးသမီးမို့ဝတ်နိုင်စားနိုင်၏။အခုတော့ဖခင်လွန်၍ အမိအိုကြီးနဲသာနေရပေ၏။သူ့မှာလည်းဖခင်လက်ပွားအမွေရထားသူမို့မောက်မာ၏။ မာန်ကြွ၏။အသုံးအဖြုန်းလဲကြီး၏။ကိုစိန်မြနှင့်မမယ်လှကချစ်လို့ယူထားချင်း မဟုတ်ပေ။ကိုစိန်မြ၏မိဘနှစ်ပါးကသူတို့သားကိုအခြားမိန်းကလေးများနှင့် သဘောမတူပဲဆွေနီးမျိုးစပ်တော်သောမမယ်လှနှင့်အိမ်ထောင်ချထားပေးရန် စီစဉ်ကြလေ၏။ချမ်းသာသောနှစ်ဘက်မိဘဂုဏ်ရှိန်ကြောင့်ကိုစိန်မြတို့ မင်္ဂလာဆောင်ဟာသူတို့ဒေသမှာဖြင့်ပြောစမှတ်ဖြစ်ဖွယ်အလှုအနေဖြင့် ခြိမ့်ခြိမ့်သဲစည်ကားလှပေ၏။
ထိုစည်းကားသောအလှု၏အခြားဘက်တွင်ကားထိုမင်္ဂလာဆောင်ဆိုင်းဝိုင်းသံ နှင့်အပြိုင်ငိုပွဲဆင်နေရသူတစ်ဦးရှိလေ၏။ထိုသူကားသူဌေးသားကိုစိန်မြ အပြောမှာနှစ်မြောခဲ့ရတဲ့သူရင်းဌားလေး“ငွေရုံ”ပါပဲ။ငွေရုံတို့ဘဝအခြေမလှ ဆင်းရဲတာမို့သူဌေးသားကိုစိန်မြရဲ့အပေးအကမ်း၊အယက်အရောမှာစုံစုံမြောရင်း ဘဝပေးယုံစားခဲ့ရတဲ့မိငွေရုံတစ်ယောက်အခုတော့ငိုချင်းတွေနဲ့သာဖြေရင်း အပိုဆုတစ်ခုနဲ့သာနေခဲ့ရတော့ပေမည်။ကိုစိန်မြ၏မိဘတွေကလည်း သူသားမင်္ဂလာမဆောင်မှီမနှောင့်ယှက်ရန်ချော့တခါ၊ခြောက်တလှည့် လာရောက်ထားတာကြောင့်လည်းကောင်း၊သူတို့သားလိမ္မာလေး ကိုစိန်မြကလည်း“နင့်ဗိုက်ထဲကကလေးကငါ့ကလေးမဖြစ်နိုင်ဘူး၊သူများနဲ့ရတဲ့ကလေး ငါတာဝန်မယူနိုင်ဘူး”ဟူသောဘူးတစ်လုံးဆောင်ကာခါးခါးသီးသီး ငြင်းခဲ့တာကြောင့်လည်းကောင်းမငွေရုံလေးခမြာဘယ်သွားတိုင်ရ၊ ဘယ်သူ့အားကိုးမရနဲ့ ကြံရာမရဘာလုပ်ရမှန်းမသိသောသောကပင်လယ်ဝေရင်း မိမိ၏အဖတ်ဆယ်မရတဲ့ဘဝကိုကိုစိန်မြရဲ့မင်္ဂလာလက်ဖွဲ့အဖြစ်ပေးဆပ်ရင်း ရွာအပြင်မြစ်ထဲမှာပဲအဆုံးစီရင်သွားခဲ့ပါတယ်။
တရွာလုံးကတော့တကြော်ကြော်တပျော်ပျော်ဖြင့်ရွာကျက်သရေကိုစိန်မြရဲ့ မင်္ဂလာဆောင်ကိုဆင်နွဲနေကြတာမို့ကိုစိန်မြကြီးရဲ့စော်ကားမှုကြောင့် ဘဝနွမ်းကြွေသွားရှာတဲ့သနားစရာငွေရုံလေးရဲ့ဖြစ်အင်ကိုဘယ်သူမှပင် မသိရှိလိုက်ကြပဲငွေရုံဘဝဤမျှနှင့်ပင်ပြည်ဖုံးကားချလိုက်ရပေပြီ။
စိန်မြမှာလဲမယ်လှနှင့်မိဘအလိုကျသာယူခဲ့ရသော်လည်းမိမိဘဝကိုအလိုမကျ မတင်းတိမ်နိုင်ပဲအရက်ကလေးတမြမြနဲ့ဘဝကျင်ဖော်လုပ်နေလေရဲ့။ဒါအပြင် ယခင်ကဆိုးစမိုက်စရှိတဲ့စိန်မြတစ်ယောက်ကျေးဇူးရှင်မိဘနှစ်ပါးနှင့်ယောက္ခမတို့ ကွယ်လွန်ပြီးနောက်အကွပ်မရှိတဲ့ကြမ်းပရမ်းပတာဆိုသလိုလုပ်ချင်တာလုပ်၊ ပွေချင်ရာပွေ၊ဆိုးချင်တိုင်းဆိုးနေတော့လေပြီ။အရက်သောက်တာအပြင် ကြက်ကလေးကလဲတိုက်၊ဖဲကလေးကလဲရိုက်၊တခါတလေအခွင့်ရလျှင်ရသလို အပျော်မယားလေးတွေပါဖက်လာပြီလေ။သူဇနီးမယ်လှကလည်းမရွှင်သာ မကြင်နာလင်လုပ်နေရသူမို့စိန်မြဘာလုပ်လုပ်ဝင်မပြော။တားဆီးဖို့ဆိုတာ ဝေလာဝေးပေါ့။စိန်မြကလည်းရှိသမျှတိုးတက်အောင်ကြံဆောင်ဖို့မဆိုထားနှင့် ရသမျှဈေးနဲ့ရောင်းပြီးထိုင်ဖြုန်းတည်းနေခဲ့လေရာမိဘလက်ငုတ်လက်ရင်းတို့သည် တစတစနှင့်အတော်ပင်ကုန်ဆုံးလာခဲ့ချေပြီ။
စ်ိန်မြကအကျင့်သာဆိုးတာနဂိုစိတ်ရင်းကသဘောကောင်းပြီးအပေးအကမ်းကလဲ ရက်ရောဆိုတော့ဒီလိုပျက်စီးနေရတာလဲသူအနားကမြှောက်ပင့်ချူစားနေသူတွေ ကြောင့်ပါပဲ။ဘဝဆိုတာဘာမှန်းမသိတဲ့စိန်မြရဲ့ဘဝထဲနောက်ထပ်ရောက်လာသူကတော့ သူ၏တစ်ဦးတည်းသောသား“အတာ”ဖြစ်၏။လက်ထပ်တာနှစ်အတော်ကြီးကြာပြီးမှ စိန်မြဘဝထဲအတာကလေးရောက်လာခြင်းကာစိန်မြအဖို့ကောင်းခြင်းပေလော၊ ဆိုးခြင်းပေလောမည်သူမျှမသိနိုင်ပေ။အတာလေးမွေးပြီးတော့စ်ိန်မြစိတ်ထဲ အတော်ပင်ပျော်သွားလေ၏။မိမိဘယ်လောက်ပင်ဆိုးပါစေ“သား”တည်းဟူသော အသိကြောင့်ဘဝအမှောင်လေးထဲမှာအလင်းရောင်လေးဖြာဆင်းလာပေ၏။ သိုပေမယ့်စ်ိန်မြအသိကားအတော်ပင်နောက်ကျခဲ့လေပြီ။နှစ်အတန်ကြာ သုံးဖြုန်းခဲ့တဲ့ဒဏ်ကြောင့်သူနေသောယခုအိမ်မှလွဲရင်ဗလာနတ္ထိ ဘာဆိုဘာမှပင်မရှိတော့ပေ။မယ်လှခမြာမှာလဲသားအတာလေးကိုမွေးမွေးပြီးခြင်း မီးတွင်းထဲမှာဆုံးရှာလေပြီ။ဒါကြောင့်စိန်မြကသူဘဝထဲမှာသူအတွက် တွယ်တာစရာနောက်ဆုံးမျိုးဆက်မို့သူသားလေးရဲ့အမည်ကို“အတာ”လို့ နာမည်ပေးခဲ့ရတာပေါ့။
စိန်မြကအတာကိုတော့အတော်ချစ်၏။အရင်ကမိုက်ခဲ့ပေခဲ့တဲ့စိန်မြတစ်ယောက် မကောင်းမှုအရာအားလုံးကိုစွန့်ကာသားလေးအတာအတွက်သူဘဝထဲမှာ တခါဘူးမျှမလုပ်ဘူးသောအလုပ်လုပ်ခြင်းကိုစတင်ခဲ့ပေသည်။နောက်ဆုံးလက်ကျန် အမွေဖြစ်သောလက်ရှိနေနေတဲ့အ်ိမ်ကြီးကိုရောင်းပြီးတဲသာသာအိမ်လေးပေါ် ပြောင်းပြီးနေ၏။ရသမျှငွေနဲ့စပါးဝယ်၊ပဲဝယ်ကုန်သယ်အလုပ်စတင်လုပ်ခဲ့ပေသည်။ တခါဘူးမျှလက်ကြောတင်းအောင်အလုပ်မလုပ်ဖူးသောစိန်မြတစ်ယောက် အခုမှစ၍အလုပ်လုပ်သောကြောင့်ပထမအကြိမ်အရှုံးပေါ်လေသည်။နောက်ပိုင်းတော့ သူသားအတာကပင်အကျိူးပေးသလားမသိအတော်အတန်ပင် အမြတ်အစွန်းရခဲ့ပေသည်။ငွေစရွှေစလေးများရွှင်လာတော့ယခင်ပေါင်းဖော်သည့် ရောင်းရင်းများကစိန်မြထံကပ်လာပြန်၏။ဇနီးမယ်လှမရှိတော့ နောက်ထပ်တအိုးတအိမ်ထူရန်တိုက်တွန်းကြလေ၏။စိန်မြကသူသားလေးကို ဘယ်မိထွေးလက်ထဲမှမထည့်လိုတဲ့အတွက်နောက်ထပ်မိန်းမယူရန်ကို ငြင်းဆိုလေ၏။
အတာလေးအရွယ်ရောက်လာတော့ရွာဦးကျောင်းဆရာတော်ထံခွင့်ပန်ပြီး အတာလေးကိုရှင်ပြုရန်စီစဉ်လေ၏။သူဘဝအတွက်ချွေးနဲစာဖြင့်လှုသည့်အလှုမို့ စိန်မြတစ်ယောက်အားကြိုးမာန်တက်နှင့်အတာ့ရှင်ပြုကိုချိမ့်ချိမ့်သဲသဲကျင်းပရန် ရည်ရွယ်လိုက်ပေ၏။ရှင်လောင်းလှည်ရာမှာလဲသားမောင်ရှင်လောင်းစီးရန် အရပ်ထဲရှိမြင်းပိုင်ရှင်လှသောင်းဆီမှကောင်းပေ့လှပေ့ဆိုသောမြင်းတစ်ကောင်ငှားလေ၏။အလှုပွဲနှင့် ရှင်လောင်းလှည့်လည်ရာတွင်ဖျော်ဖြေဖို့အတွက်လည်းမြို့မှ နာမည်ကြီးဇာတ်အဖွဲ့ကိုရရန်သူကိုယ်တိုင်ပင်မြို့တက်ငှားလေ၏။
“အရှေကိုလျောက်ပါလို့၊ အနောက်ကိုတဲ့မျှော်လိုက်ရင်၊ တံခွန်တိုင် ရွှေကုက္ကားနဲ့ ဘုရားကိုမြင်”
အစရှိတဲ့ဗျောသံနှင့်အတူမောင်ရင်လောင်းအတာဟာမြင်းကြီးပေါ်မှာ အခန့်သားစီးပြီးရွာတန်းတလျှောက်လှည့်လည်လာနေတဲ့ လူတန်းရှည်ကြီးကိုကြည့်ရင်းမောင်ရင်လောင်းရှင်စိန်မြခမြာဝမ်းသာပီတိ ဂွမ်းဆီထိသကဲ့သို့မြူးပျော်လို့ပေါ့။တစ်ဦးတည်းသောသားတော်မောင်အတာရဲ့ ရှင်ပြုပွဲအလှုဟာဆိုရင်စိန်မြအဖို့တော့မဟာအလှုပွဲတော်ကြီးဆိုရင်လဲ မမှားနိုင်ဘူးပေါ့။
ဒီလိုပျော်ရွှင်နေကြသောရှင်လောင်းလှည့်လည်ပွဲကြီးထဲ အတာလေးစီးလာတဲ့မြင်းကြီးကဘယ်ကဘယ်လိုဖောက်သွားလဲမသိ ငြိမ်ငြိမ်လေးသွားနေရာကနေရုတ်တရက်ဗြုန်းကနဲဆိုဂမူးရူးထိုးပြေးပါလေရော။ အနားကလူတွေကလဲရုတ်ကနဲမြင်းပြေးသွားတာကြောင့်အလန်တကြားဖြစ်ပြီး ဘာလုပ်လိုဘာကိုင်ရတော့မှန်းမသိတော့ပဲတောင်ပြေးမြောက်ပြေးနဲ ရုတ်ရုတ်သဲသဲဖြစ်ကုန်ပါ၏။ရှင်လောင်းအဖေစိန်မြခမြာလည်း“လုပ်ကြပါဦးဗျို့၊ အတာမြင်းပေါ်ပါသွားပြီ၊လိုက်ကြပါဟ”ဟုတစာစာအော်ဟစ်ပြီး မြင်းကြီးပြေးတဲ့နောက်ကိုဝရုန်းသုန်းကားလိုက်သွားပါတော့တယ်။ ရွာသားတွေကလဲရုတ်တရက်ငေးကြောင်နေရာကနေမြင်းကိုဖမ်းဖို့ စိန်မြနောက်ကနေပြေးလိုက်သွားကြပါတယ်။
မြင်းပေါ်ကအတာလေးမှာလဲငယ်ကလဲငယ်၊ပထမဆုံးအကြိမ် မြင်းစီးဘူးတာဆိုတော့တလကြမ်းပြေးနေတဲ့မြင်းကြီးရဲ့ကြောပေါ်ပါသွားရင်းနဲ့ ရွာအပြင်လဲကြရောမြင်းပေါ်ကနေတလိမ့်ကောက်ကွေးနဲ့ ပြုတ်ကြသွားပါတယ်။အရှိန်နဲ့သွားနေတဲ့မြင်းပေါ်ကကျတာဆိုတော့ မောင်ရှင်လောင်းအတာလေးမှာရှင်အဖြစ်တောင်မရောက်နိုင်တော့ပဲ မြင်းပေါ်ကခေါင်းစိုက်ကျတဲ့ဒဏ်ကြောင့်ကျတဲ့နေရာမှာပဲ ပွဲချင်းပြီးဆုံးသွားပါတော့တယ်။စိန်မြခမြာလည်းသားအတာလေးအလောင်းကို ရင်ဝယ်ပိုက်ငိုကြွေးရင်းဖြေဆည်ခြင်းကင်းဝေးရာကနေအခြေမလှတဲ့ သွက်ချာခြင်းဘဝရောက်သွားပါတော့တယ်။
ဒီလိုနဲ့ဘဝမှာတစ်ယောက်ထဲအထီးကျန်နေခဲ့ရတဲ့စိန်မြတစ်ယောက်တနေ့နေ့မှာ သူသားလေးပြန်ရောက်လာနိုး၊ရှင်ပြုရနိုးနဲ့သီချင်းတွေအော်ဆိုရင်း ရုးသွားပေတော့၏။စိန်မြမှာနဂိုထဲမှလူချစ်လူခင်ကလည်းနဲပါး အခုလိုအရူးတပိုင်းဘဝရောက်ရပြန်တော့နဂိုအခံနဲ့ဘယ်သူမှ ကျွေးချင်ပေးချင်စိတ်မရှိကြတော့ပဲဘေးမဲ့သာပေးထားလိုက်ကြပါတယ်။ဒီရွာကို စာသင်သားအဖြစ်နဲ့ရောက်ရှိနေတဲ့အသျှင်ဝါယမကလည်းအဖြစ်ဆိုးလှတဲ့ စိန်မြဖြစ်စဉ်ကိုမကြည်ရက်နိုင်တာနဲ့ပဲဒီနယ်မြေနဲဝေးလျှင်သူ၏ကြမ္မာကြွေးတွေ ပြေစေနိုင်စေရန်အလို့ဌာမိမိရွာအပြန်အရုးစိန်မြကိုခေါ်ဆောင်သွားဖို့ ဆုံးဖြတ်ခဲ့ပါတယ်။
တကယ်တမ်းအတာစီးတဲ့မြင်းပြေးသွားရတဲ့အဖြစ်အပျက်က မြင်းပိုင်ရှင်လှသောင်းကသေသွားသူသူ့နှမဝမ်းကွဲငွေရုံရဲ့အဖြစ်ဆိုးအတွက် စိန်မြကိုလက်စားချေရန်အတာစီးတဲ့သူမြင်းကိုဘယ်သူမှမမြင်အောင်အနားကနေ မြွေရုပ်ကလေးလှမ်းပြလိုက်တော့မြွေကြောက်တဲ့သူရဲ့မြင်းက ကဆုန်စိုင်းပြေးသွားရတာပါ။ဒီအကြောင်းကိုဘယ်သူမှမသိလိုက်ကြပဲမြင်းက သူဘာသာစိတ်ရူးပေါက်ပြေးသွားတာလို့ပဲအများကထင်ကြေးပေးကြပါတယ်။စိန်သောင်း၏ ဘဝကြမ္မာကြွေးကြောင့်ပေလော၊သူငွေရုံအပေါ်ပြုခဲ့ဖူးတဲ့ အကုသိုလ်ကြောင့်ပေလော၊သူချမ်းသာစဉ်ကကမ်းကုန်အောင် မိုက်မဲမှုတွေကြောင့်ပေလော၊လှသောင်း၏ကလဲ့စားကြောင့်ပေလောထိုထိုသော အကြောင်းအရာတွေကပင်စုပေါင်း၍စိန်မြဘဝရူးသွပ်ခြင်းဖြင့်နိဂုံးချုပ်ရပေတော့မည်။
Posted by ချမ်းလင်းနေ at 1:18 PM0comments
နားရှိတဲ့နေရာကနေ ဒီအသံတွေ ကြားပါစေ။
ဒီဝသုန်ပေါ် မားမားရပ်လို့ ငေးနေတယ်အမေ။
အတိတ်တံဆွေးခွက်ထဲ ပလက်မျောနေလိုက်တာများ ဆုံချည်ဆန်ချည်ပေါ့။
အဖန်တရာမက ရင်နာလှတဲ့ လောကဒဏ်ဟာ
ဇာခြင်ထောင်ချသလို ရင်ခွင်ထဲ သွတ်သွင်းဖို့ ချော့မြူနေတယ်။
မှောက်လိုမှောက် လှန်လိုလှန် ကျင့်ရဖန်များတော့
ရာဇဝင်မှာ အလောင်းလှဖို့တောင် အတော်ကြိုးစားရဦးမယ် အမေ။
ဟန်ဆောင်လို့ ပြုံးရယ်နိုင်အောင် ကြိုးစားနေဆဲပါအမေ။
လောကကြီးဆိုတာ လုံးဝန်းနေတဲ့ သံသရာဆိုပေမယ့်
ကမ္ဘာမြေပံသု သိလာထုလဲ သက်သေအထူးရှိဆဲပါ။
Posted by ချမ်းလင်းနေ at 1:22 AM3comments
Labels: ကဗျာ, မေမေ
ရာဂဘဝင်ကို ဖန်စေ၏ ။
ရှိုက်မက်သော အတွေ့ဖြစ်စေ၏ ။
အသိဥာဏ်ကို မှိုင်တွေ၏ ။
လုံးစုံဘဝကို ချုပ်စေ၏ ။
" အချစ် " ဖြစ်၏..........။
Posted by ချမ်းလင်းနေ at 4:47 AM 1 comments
ကိုယ်နားကိုယ်မယုံနိုင်အောင်ဖြစ်သွားတယ်။ “အောင်ခိုင်ဆုံးပြီ” “ဟုတ်မှဟုတ်ရဲ့လား။ ငါအိမ်မက်မက်နေတာလား။
အိပ်ချင်မူးတူးနဲ့ တဘက်မှအသံကိုကြားနေရတယ်။ ဝေလီဝေလင်းအချိန်ရဲ့ မှောင်ပြပြအလင်းရောင်အချို့ ခန်းဆီးစနောက်ကွယ်ကနေ ထိုးဖောက်ပြီး ငါ့ခေါင်းရင်းမှာ ဖြာဆင်းနေတယ်။ ဟုတ်ပါတယ်။ ဒါအိမ်မက်မဟုတ်ပါဘူး။
စင်ကာပူမှသော်ကြီးက မနက်စောစောဖုန်းဆက်ခေါ်ပြီး ဒီ သတင်းကိုပြောတာ။ အောင်ခိုင်ဆုံးပြီတဲ့။ ဦးနှောက်အမြှေးရောင်ပြီး ဆေးရုံမှာဆုံးတာ။ ညက ၃ နာရီလောက်ကမှ အလုပ်ကပြန် ရောက်လာတာ သိပ်တောင်မအိပ်ရသေးဘူး။
ပုံမှန်ဒီအချိန်ဆို နိုးတာတောင်မဟုတ်သေး။ မနက်စာဆိုတာကြာပြီမေ့ပေါ့။ အခုတော့ အောင်ခိုင်သတင်းကြားပြီး ပြန်လဲအိပ်မရတော့ဘူး။ စိတ်တွေဝေဝေဝါးဝါးဖြစ်သွားတယ်။ မသဲမကွဲနဲ့ ဒီကောင့်မျက်နှာကို တရေးရေး ပြန်မြင်လာတယ်။
ညာဘက်စောင်း ပြန်မှေးကြည့်တယ်။ မရဘူး။ ဘယ်ဘက်စောင်းလဲမရဘူး။ ရင်ထဲမှာလဲ ဆွေးသလိုလိုနဲ့ ခံစားရတာ။
ဟာကွာ………..။ ဘယ်လိုဖြစ်တာပါလိမ့်။ ဒီကောင်ကွာ ငယ်ငယ်ရွယ်ရွယ်နဲ့။ ဘာဖြစ်မှန်းမသိဘူး။ ကုတင်ပေါ်ကနေလှဲပြီး ဒီ ကောင်အကြောင်းတွေပဲ စဉ်းစားနေမိတယ်။
Grand Royal တွေတောင် ဈေးလျော့တော့မယ်……
Royal က ခွေတွေပြန်မအပ်လို့တဲ့….
မူးပြီးတိုင်း မင်းရွတ်နေကြ မောင်စိန်ဝင်း(ပုတီးကုန်း)
YTUက ဘော်ဒါဟောင်းအတွက် ငိုနေပြီ....
ဘော်ဒါတွေအားလုံး “စလုံး” ထွက်မယ်….
(ကွယ်လွန်သွားသော အင်းစိန် သံမဏိစက်ရုံမှ A.E အရာရှိ သူငယ်ချင်း အောင်ကိုနိုင် (ခ) အောင်ခိုင်အတွက် အမှတ်တရ။)
Posted by ချမ်းလင်းနေ at 1:35 AM 1 comments
#### မြွေဆွယ်ကျိုးခြင်း ####
Posted by ချမ်းလင်းနေ at 7:34 PM 1 comments
Posted by ချမ်းလင်းနေ at 7:40 AM0comments
*.*.* ဆန္ဒတစ်စုံရဲ့နောက်ကွယ် *.*.*
Posted by ချမ်းလင်းနေ at 1:01 AM0comments
တလောက ကိုရန်အောင်ရဲ့စက်ဘီးစီးခြင်းအက်ဆေးလေးကိုဖတ်ရတော့အတော့်ကို သဘောကျတယ်ဗျ။နောက်ပြီး အခုလောလောဆယ် ကျွန်တော်လဲ ကျွန်တော်ရဲ့စွန့်ဦးတည်ထွင်သူများဆိုတဲ့ ခေါင်းစဉ်အတွက် စက်ဘီးအကြောင်း လေ့လာနေတော့ တိုက်ဆိုင်သွားပြီး သူ့အက်ဆေးလေးကို နောက်တစ်ခေါက်တောင် ထပ်သွားဖတ်ဖြစ်သေးတယ်။ ဟုတ်တယ်ဗျာ့.....ငယ်ငယ်က (၂တန်း၊၃တန်းအရွယ်ကပေါ့) သူများတွေ စက်ဘီးစီးတာမြင်ရင် ကျွန်တော်လဲအရမ်းစီးချင်တာ။ကျွန်တော်ကအဲဒီတုန်းက၂၅လမ်းအောက်လမ်း မှာနေတာပါ။ ၂၅လမ်းအောက်ဘက်ဆိုတာ အခုအချိန်အထိစက်ဘီးတွေ ရောင်းတဲ့လမ်းပေ့ါ။ကျွန်တော်တို့အိမ်လဲ (သူများကိုငှားထားတာ)စက်ဘီးအရောင်းဆိုင်ပါ။နေခင်းဘက်(ကျွန်တော်ကျောင်းမသွားတဲ့ရက်တွေ) ဆိုရင် အိမ်ရှေ့စက်ဘီးရောင်းတဲ့နေရာလေးဟာ ကျွန်တော့်ကစားကွင်းပေါ့။ အလုပ်သမားအစ်ကိုကြီးတွေကလဲ စက်ဘီးတွေဆင်တဲ့သူကဆင်၊ ရောင်းတဲ့သူကရောင်းနဲ့ အလုပ်တွေရှုပ်နေတဲ့ကြားက ကျွန်တော်စက်ဘီး ပတ်စီးချင်တယ်လို့ပူဆာတိုင်း ကျွန်တော့်ကိုတင်ပြီးစက်ဘီးတပတ်စီးပြရတယ်။ကျွန်တော်ဆိုတဲ့ကောင်ကလဲ အရွယ်သာငယ်တာ(အဲဒီတုန်းကအရွယ်ကို အခုပြန်တွေးပြီးပြောတာ) စက်ဘီးဆိုရင် ကိုယ်တိုင်နင်းရမှ။အတင်းကို စက်ဘီးရဲ့ဘားတန်းအောက်ကိုအတင်းဝင်(ယောကျာ်းစီးမောင်ဗမာစက်ဘီးပါ) ခြေနင်းပေါ်တက်၊ အတင်းနင်းတော့တာပဲ၊ ကလေးအရွယ်ဆိုတော့ ဒေါက်ထောက်ထားမှန်းလဲမသိ၊ နင်းနေရပြီဆို ပြီးရော နောက်တော့မှ ငါနင်းနေတာ ဘာကြောင့်မရွေ့တာလဲ။ဟိုဒီလျောက်ကြည့်တော့မှ ဒေါက်ထောက်ထားတာ တွေ့ပြီး ထောက်ထားတဲ့ဒေါက်ကို မနိုင့်တနိုင်ဖြုတ်တော့တာပဲ။စက်ဘီးကိုမနိုင်ပဲဒေါက်ကိုဖြုတ်တာ စက်ဘီးကကိုယ်ပေါ်မှောက်ကျပြီး လည်နေတဲ့နောက်ဘီးထဲ ကျွန်တော့်ညာဘက်လက်ဝင် သွားရောဗျ။
(ကောင်းတယ်။ ဒီလောက်ကမြင်းတဲ့မျောက်ဘာဖြစ်သွားလဲ သိချင်တယ်မဟုတ်လား။)ကျွန်တော်ကံကောင်းတယ်ဆိုရမလားပဲ။စက်ဘီးခြေနင်းကနေ ကျွန်တော့်ရဲ့ကလေးအားနဲ့နင်းတော့စက်ဘီးနောက်ဘီးကအရမ်းမလည်ပဲ ကျွန်တော့်လက်ဝင်သွားတာနဲ့ ဘရိတ်အုတ်သလိုဖြစ်သွားပြီးကျွန်တော့်ရဲ့ ညာဘက်လက်မလေးကိုပဲ ဟက်တက်ကွဲပြီး တသက်တာအမှတ်တရဒဏ်ရာ ပေးသွားပါတယ်။အခုဒီစာကိုရေးနေစဉ်အထိ ကျွန်တော့်လက်မက ဒဏ်ရာကိုကြည့်ပြီး ငယ်စဉ်ကစက်ဘီးအလွန်စီးချင်သောငယ်ဘ၀လေးကိုပြန်သတိရမိပါသေးတယ်။ဒါတင်ပဲလား။ နောက်ရှိပါသေးတယ်။ မြို့ထဲမှာနေတော့ မြို့ထဲမှာ ကားကရှုပ်၊လူကရှုပ်နဲ့ဆိုပြီး အမေက စက်ဘီးဝယ်မပေးပါဘူး။အဲဒီအချိ်န်ကBMXဘီးတွေ အရမ်းခေတ်စားနေတာ။ကလေးတကာက BMXမှ BMXအရမ်းခေတ်စားတဲ့အချိန်ကိုဗျ။ နောက်ကျွန်တော် ၅တန်းမှာ ကမာရွတ်ကိုပြောင်းရတော့ အိမ်နီးနားချင်းကလေးတွေ(နောင်ကျွန်တော်ရဲ့ အခင်ဆုံးကျောင်းနေဘက်တွေ) စက်ဘီးကိုယ်ဆီနဲ့ နွေရာသီကျောင်းပိတ်ရက်ဆိုရင် တခြားမြို့နယ်ကသူငယ်ချင်းတွေသွားခေါ် ပြီးတော့ ကျွန်တော်တို့ အိမ်နားက အင်းယားကန်ဘောင်ဘက်သွားပြီးအကြော်သွားစားကြတယ်။ဟဲဟဲ....အကြော်ပဲစားတာပါ။ အဲဒီတုန်းကဘာစိတ်မှရှိသေးဘူး။သိပ်မတွေးနေကြနဲဦးနော်။အားလုံးမှာ စက်ဘီးကိုယ်စီနဲ့ ကျွန်တော်ကလွဲရင်ပေါ့။ကျွန်တော်ကတော့ အိမ်ဘေးက သူငယ်ချင်းသော်ကြီးကောင်းမှုနဲ့ သူစက်ဘီးအပို (သူအစ်ကိုတွေရဲ့ဘီးပါ)ကိုစီးရတာပါ။အိမ်ကို စက်ဘီးဝယ်ပေးဖို့ပြောတိုင်း အမေကနင်တို့တွေကို စက်ဘီးဝယ်ပေးလိုက်ရင်း မြင်းဇောင်းကမြင်းကို ကြိုးဖြေပေးသလို ဖြစ်နေမှာပေါ့။နင်တို့က လမ်းထဲတင်စီးမှာမဟုတ်ဘူး။အင်းစိန်လမ်းမပေါ်တက် ကားတိုက်ရင် ငါပဲရင်ကြိုးရမှာပေါ့ဆိုပြီး ဘယ်တော့မှ မ၀ယ်ပေးဘူး။ကျွန်တော်လဲ အမေကိုပြောဖန်များတော့ ဒီစကားကိုနားယဉ်လာပြီ။ကဲ မ၀ယ်ပေးလဲနေကွာဆိုပြီး စက်ဘီးဝယ်ဖို့ရူးတာကို ရပ်လိုက်တယ်။ ကျွန်တော်တို့ကလဲ စက်ဘီးအမြဲစီးတာ မဟုတ်ဘူးလေ တခါတရံမှဆိုတော့။တကယ်ပါအမေက သူသာသေသွားတယ် စက်ဘီးဘယ်တော့မှ မ၀ယ်ပေးသွားဘူး။ ဒါပေမယ့် အခုအသက်အရွယ်တွေရ၊ ကလေးတွေ ဘာတွေရလာတော့မှ ဟိုတုန်းကအမေ ဘာကြောင့်စက်ဘီးမ၀ယ်ပေးရလဲဆိုတာ နားလည်သဘောပေါက်လာတော့တယ်။မိခင်စိတ်ဆိုတာ သားသမီးတွေအတွက်တော့ ကိုယ်ကိုတိုင် မိဘနေရာရောက်မှ သိလာတော့တယ်ဗျာ။ ကျွန်တော်တို့တွေ ၁၀တန်းအောင်ပြီး တက္ကသိုလ်တွေတက်ဖို့စောင့်နေတုန်းအထိ ဒီလိုပဲ စက်ဘီးတွေစီးပြီး တစ်ယောက်အိမ် တစ်ယောက်လျှောက်လည်ခဲ့ကြတယ်။ အဲဒီလိုမျိူး ကျွန်တော်တို့အခုစီးနေကြတဲ့ စက်ဘီးလေးတွေကကနဦး အစကဆိုရင် တာရာတို့ ကျွတ်တို့တောင်မပါသေးဘူး။ သူတို့ကို ဘယ်လိုစီးကြလဲဆိုရင် နွားလှည်းကဘီးတွေလိုပေါ့ အားလုံးက သစ်သားတွေနဲ့ပါ။စက်ဘီးဆိုတာကို Wikiတွေထဲမှာ အခုလိုဖွင့်ဆိုထားတာကတော့ တန်းများနှင့်တွဲ၍ ရှေ့နောက်နှစ်ဘက်တန်းလျှက်ရှိသော ဘီးနှစ်ဘီးကိုလူ့စွမ်းအား(ခြေထောက်)ဖြင့်နင်းရသောအပေါ့စားယာဉ်တစ်မျိုးဟုတွေ့ရှိရပါတယ်။ပထမဆုံးတီထွင်တဲ့ စက်ဘီးကို (တကယ်ဆိုရင် စက်ဘီးလို့ပြောရခက်ပါတယ်)။ ၁၈၁၇ခုနှစ်မှာ ဂျာမနီလူမျိုး Baron Von Drais ဆိုတဲ့လူကတီထွင်ခဲ့တာပါ။သူစတီထွင်တဲ့ စက်ဘီးဟာ အစကကျွန်တော်ပြောသလို ခြေနင်းမပါ။တာယာမပါ။အားလုံးသစ်သားကိုယ်ထည်ချည်းပဲ။စီးချင်ရင်လူကပထမလမ်းလျောက်ရင်းတွန်းပေးရပါတယ်။နဲနဲလေးအရှိန်ရလာမှ လူကအပေါ်ကနေ တက်ထိုင်ပြီးလိုက်သွားရပါတယ်။(ကျွန်တော့်စိတ်ထင် သူတို့စီးပုံက အခုခေတ်ကလေးတွေ စကူတာတို့၊ စကိတ်တို့ စီးသလိုပဲထင်ပါတယ်။)အဲ့ဒီအချိန်ရဲ့အတိုင်းအတာမှတ်တမ်းများအရ အဲ့ဒီစက်ဘီးဟာ တစ်နာရီကို၁၅ကီလိုမီတာနှုန်းပဲပြေးပါတယ်။ ဒီဘီးလေးတွေကို အပြေးယာဉ် (Running Machine)လို့ခေါ်ကြတယ်။ဒီလိုဘီးမျိုးတွေကို ၁၈၃၀အထိ တွင်တွင်ကျယ်ကျယ်အသုံးပြုလာခဲ့ကြပါတယ်။ ၁၈၃၉ခုနှစ်မှာ စကော့တလန်နိုင်ငံသား ပန်းပဲဆရာကြီး Krikpatrick Macmillan ဆိုသူက ခြေနင်းပါပြီး ပထမဆုံး လူတွေဟာ ခြေထောက်ကို မြေကြီးမှာထိစရာမလိုပဲခြေနင်းရုံနဲ့စီးလို့ရတဲ့စက်ဘီးမျိုးကိုတီထွင်ပြန်ပါတယ်။ သူစတင်တီထွင်ခဲ့စဉ်ကစက်ဘီးက တဘက်ပုံပါအတိုင်းဖြစ်တဲ့ Pedal Driven Bicycle (ခြေနင်းစက်ဘီး)လေးပါ။ဂရင်းနစ်စာအုတ်မှာစက်ဘီးကို သူကစတီထွင်တယ်လို့ မှတ်တမ်းတင်ထားပါတယ်။သူမွေးရပ်မြေ စကော့တလန်နိုင်ငံ Coathillမှာ ၁၉၄၆ခု စက်တင်ဘာလ(ဒုတိယကမ္ဘာစစ်ကြောင့် ၈နှစ်နောက်ကျရတာပါ)မှာ သူ့ရဲ့တီထွင်မှု နှစ်တစ်ရာကို ကျင်းပခဲ့ပါတယ်။
Posted by ချမ်းလင်းနေ at 11:04 PM0comments
Labels: စုံစီနဖာ, ဗဟုသုတ, ဆောင်းပါး
------ ပြာ --------
သုခ ဒုက္ခ အထွေထွေလည်း ရင်ဆိုင်ရမယ်။
ချစ်ခြင်း မုန်းခြင်း အဖျာဖျာလည်း တွေ့ဆုံရမယ်။
ပျော်ကြ ငိုကြ ဘ၀ဇာတ်လည်း ကကြရမယ်။
တွေ့ဆုံ ကြုံကွဲ တခဏလည်း ဖြစ်ကြရမယ်။
Posted by ချမ်းလင်းနေ at 11:21 PM2comments
ကျွန်တော်ကဗျာရိုင်းသွားရင်ခွင့်လွှတ်ပါဗျာ။ဒီအကြောင်းရေးချင်တာကြာပြီ။ကဗျာလေးပဲရေးပြီးမှတ်စုထဲသိမ်းထားရတာ။ ဗုဒ္ဓဘာသာတစ်ယောက်အနေနဲ့ ဒီနာမည်စကြားတော့က အစပ်အဟပ်မတဲ့သလို ဖြစ်နေတာ။ကိုယ်ယုံကြည်တဲ့ အလေးအမြတ်ထားတဲ့ဘုရားရှင်ရဲ့နာမည်ကို ဘုရားတားမြစ်တော်မူတဲ့ ယမကာနဲ့ တွဲဖက်တွေ့ရတော့ ရင်ထဲကသိကအောင့်ဖြစ်တယ်ဗျာ။စတွေ့တာကရန်ကုန်ကတည်းကလွန်ခဲ့တဲ့၈နှစ်ဝန်းကျင်ရှေ့ဆောင်ရုပ်ရှင်ရုံအောက်က လန်ဒန်မြူးဇစ်ခွေရောင်းတဲ့ဆိုင်မှာအဲဒီတုန်းကEnyaခွေဝယ်ဖို့သွားတာ။ဟိုဒီရှောက်မွှေရင်းနဲ့BuddhaBarChillout ဆိုတဲ့နာမည်နဲ့ခွေသုံးလေးခွေသွားတွေ့ရတယ်။နောက်တော့ဒူဘိုင်းရောက်ပြီးမှဗုဒ္ဓဘားဆိုတာ
- Boissy-d'Anglas street, France
- Beriut, Lebanon
- Dubai, U.A.E
- Sao Paolo, Brazil
- Prague, Czeh Republic
- Washington, U.S.A
- Jakata, Indonesia တို့မှာပါ။
သူတို့က ဒီဘားတွေကို တကယ်ဗုဒ္ဓဘာသာနိုင်ငံတွေမှာတော့ မဖွင့်ရဲသေးဘူး (အထင်ပြောတာပါ။ နောင်ဆိုရင်တော့မသိဘူး)။ဒီနာမည်နဲ့ဘားတင်မကတော့ပါဘူး စားသောက်ဆိုင်၊အနှိပ်ခန်း (spa)၊ ဟိုတယ်၊ Chill outသီချင်းခွေများ စတာတွေပါ စီးပွားဖြစ်လုပ်နေကြပါတယ်။ အခုဆို အင်ဒိုနီးရှားဗုဒ္ဓဘာသာများက သူတို့ ဆီက ဗုဒ္ဓဘားကို နာမည်ပြောင်းဖို့ တိုက်တွန်းနှိုးဆော်နေတာအောင်မြင်နေပါပြီ။ သူတို့တွေကကိုယ့်စီးပွားအတွက် သူတပါးဘာသာရဲ့နာမည်ကို ခုတုန်းလုပ်နေတာ ကောင်းကြသေးရဲ့လားဗျာ။ အရက်ရောင်းပါ ဗုဒ္ဓနာမည်နဲ့ ဗုဒ္ဓရုပ်ထု(ဆင်းထုတော်)တွေကိုအလှဆင် အပန်းဖြေဖို့ မသုံးစေချင်ဘူးဗျာ။ ကမ္ဘာ့ဗုဒ္ဓအသင်းကြီးရေ....ဒီအတိုင်းကြည့်နေကြတော့မှာလား။
ဗုဒ္ဓသာသနာတော် အဓွန့်ရှည် တည်တံ့ပါစေသော်..............။
Posted by ချမ်းလင်းနေ at 10:15 PM0comments
ဒီခေါင်းစဉ်ဘာကြောင့်ပေးရလဲဆိုတော့အခုပြောမယ့်အကြောင်းအရာတွေက မိတ်ဆွေတို့သိပြီသား ဖြစ်ချင်ဖြစ်နေမယ် ကမ္ဘာမှာပထမဆုံးသော တီထွင်သူတွေရဲ့အကြောင်းပါ။သူတိုတွေဘာတွေကိုတီထွင်ကြလဲ၊ ဘယ်လိုအခက်အခဲတွေတွေ့ရလဲဆိုတာတွေပါ။တစ်ချိုအကြောင်းအရာတွေ မှားခဲ့ရင်ခွင့်လွှတ်ပြီးအမှားပြင်ပေးကြပါ။
အင်း..................ဘာအကြောင်းကစပြောရမလဲ...?????? ဟာ....ကွာမထူးပါဘူး။ ငါအခုကိုင်ပြီးစာရေးနေတဲ့ ဘောပင်အကြောင်းပဲ ရွှီးရင်ကောင်းမယ်။(စာရေးရင် ဘောပင်နဲ့အရင်ရေးချရတာ မဟုတ်ရင်စာရိုက်နေရင်းကိုပြောချင်တာတွေပြောက်ကုန်ရောသိတယ်မှတ်လားလိပ်ကတောင်ဆရာခေါ်ရတယ်..
အေဖိုးတစ်မျက်နှာနှစ်ရက်)။ရွှီးတယ်ဆိုလို့ပေါက်ကရမထင်ပါနဲ့။ နယ်နယ်ရရမဟုတ်ပါဘူး အလယ်ကမလှပါ။အမှုမဲ့မှတ်မဲ့ဟိုချောင်းဒီချောင်း(စာအုပ်နဲ့wikiဆိုက်ပါ။သမီးရည်းစားအတွဲချောင်းတာမဟုတ်ဘူး။၀ါသနာမပါဘူး။ ဟဲဟဲ..ခင်ဗျားတို့အနော့်ကိုမယုံဘူးမှတ်လား)။ကဲကဲပြောနေတာာကြာပါတယ်.........ကဲရွာစားရေ...
မင်းသမီးထုတ်ရအောင်ဟေ့။ဟာ..စာသားတွေဇာတ်ထဲရောက်ကုန်ပြီ။ကဲကဲအပျော်တွေအပျက်တွေ ဘေးချတကယ်ချော်တဲ့ စာသားတွေရေးရအောင်ဗျာ။
ကျွန်တော်တို့အခုရေးနေတဲ့ဘောပင်ကိုစဦးတီထွင်သူက ၁၈၈၈ခုနှစ်မှာ အမေရိကန်လူမျိုး
သားရေနယ်သမားJohnJ.Loudက ပထမဆုံးသောဘောနှင့်ရေးသောBallPointPen (အရင်က ဖောင်တိန်တွေနဲ့ စာရေးကြတာပါ) ကိုတီထွင်ခဲ့ပါတယ်။ အဲဒီတုန်းကသူဟာတီထွင်ရုံသာတီထွင်ခဲ့ပြီး လူတကာသုံးဖို့စီးပွားဖြစ် မထုတ်လုပ်နိုင်သေးပါဘူး။ သူဘာဖြစ်လို့မထုတ်လုပ်နိုင်သေးတာလဲ ဆိုတော့သူတီထွင်ခဲ့တဲ့ဘောပင်က အဓိကမှင်ပြဿနာပါ။ အပူရှိန်ကြောင့် အရည်ပျော်နေတဲ့မှင်ကို ကြာရှည်စွာ မထိန်းသိမ်းနိုင်သေးလို့ပါ။ ဒုတိယအဆင့်အနေနဲ့Loudရဲ့ တီထွင်မှုနှစ်၅၀အကြာမှာ ဘောပင်ကိုစီးပွားဖြစ် ထုတ်လုပ်နိုင်အောင် ကြိုးစားကြသူများကတော့ ဟန်ဂေရီနိုင်ငံသားညီအစ်ကိုLadislas (Lazlo ဆိုတဲ့နာမည်နဲ့ ဂင်းနစ်စာအုပ်မှာဖော်ပြထားပါတယ်) နှင့်Georg Biroတို့နှစ်ဦးဟာ ၁၉၃၈မှာ ဈေးအသက်သာဆုံး ဘောပင်ကိုပထမဆုံး ထုတ်လုပ် ခဲ့ပါတယ်။ အကြီးဖြစ်တဲ့ LadislasBiroဟာ အရမ်းတော်ပြီး သူ့အစွမ်းအစတွေကို လဲယုံပါတယ်။ ဒါကြောင့် သူဟာ သူ့ညီဓာတုဗေဒပညာရှင် Georg အကူအညီနှင့် မှင်ကိုဘောပင်ထဲမှာ ကြာရှည်စွာ ထိန်းသိမ်းနိုင်မည့်နည်းကို ရှာဖွေခဲပါတယ်။ ဒုတိယကမ္ဘာစစ်အတွင်းမှာ နာဇီတို့ရဲဒဏ်ကြောင့် သူတို့ညီအစ်ကိုဟာ ဥရောပကနေ အာဂျင်တီးနားနိုင်ငံကိုထွက်လာပြီး သူတို့တီထွင်ထားတဲ့ ဘောပင်ကို ထုတ်လုပ်ဖို့ကြံကြပါတယ်။ ကံဆိုးစွာနဲ့ သူတို့ထုတ်လုပ်တဲ့ဘောပင်တွေရဲ့ မှင်တွေဟာ မခြောက်သွားပေမယ့်လဲ ကမ္ဘာဆွဲအားကြောင့် လက်ထဲမှာကြာရှည်စွာ တည့်တည့်မတ်မတ် မကိုင်ထားနိုင်ပဲ မှင်တွေဟာ ဘောစိမှတဆင့် ယိုစီးကျလာတာကိုတွေ့ရပါတယ်။ တခါတရံမှင်တွေဟာစာရွက်ပေါ်ကို ပစ်ခဲစွာထွက်ကျလာပါတယ်။ ဒီပြဿနာကို ဖြေရှင်းသူကတော့ အမေရိကန်နိုင်ငံသား အရောင်းစာရေးလေး Milton Reynoldဟာ Biroညီအစ်ကိုရဲ့ ပြဿနာကိုတွေ့ရှိပြီး မှင်များကို ယိုစီးမကျလာစေအောင်ဖန်တီးပြီး ၁၉၄၅ခုမေလတွင် Reynold International Pen Companyကို တည်ထောင်ပြီး ကမ္ဘာ့အအောင်မြင်ဆုံး Reynoldဘောပင်များကို ထုတ်လုပ်ခဲ့ပါတယ်။ အခုလက်ရှိ ကျွန်တော်တို့ သုံးနေတဲ့ ဘောပင်တွေဟာ ခေတ်အဆက်ဆက် ပညာရှိ အဖုံဖုံတို့တီထွင်ကြံစထုတ်လုပ်မှုကြောင့် အခုဆိုရင် အကောင်းတကာ့ အကောင်းဆုံး ရေးသားနိုင်ကြပါပြီ။
Posted by ချမ်းလင်းနေ at 4:56 PM0comments
***အစ၏အဆုံး (သို့မဟုတ်) အဆုံး၏အစ***
ကမ္ဘာဦးသူတို့သည် ရသပထ၀ီကိုစားကုန်၏။ အချို့အဆင်းလှကုန်၏။
ထိုသို့ပြုသည်ရှိသော် .. ။
Posted by ချမ်းလင်းနေ at 9:38 AM0comments
Posted by ချမ်းလင်းနေ at 9:35 AM0comments
*** မနှင်းဖြူ ***
“ တစ် ”
ဓားသွားမူ ထက်စွာ၏ .. ။
“ နှစ် ”
နတ်သမီးတစ်ပါးရဲ့ အလှကို ငါမှတ်မိခဲ့ပြီ။
အိပ်မက်အပြုံးရှင်ပေါ့ ၊ သူ ....
“ မနှင်းဖြူ ” လေ။
“ သုံး ”
“ မနှင်းဖြူ ”
ငါကလွဲလို့ ၊ မင်းတောင်မှမသိ
မြတ်နိုးမိသူပါ။ သူဟာ ...
ဒဏ်ရာထင်အောင် ပြင်းထန်ခဲ့ ၊ ကဲ ...
လမ်းများပေါ် “ငါ ” တေးသီခဲ့တယ်
ကောင်းကင်ငိုနေရဲ့ ၊ အို .. အလှ
မင်းကို တမ်းတလို့ ..
“ကိုစောငြိမ်း” ရဲ့ “ပွင့်ဦး”
ငါဆိုခဲ့ဖူးပြီ .. ။
ဟောသည်မှာ အချစ် ..
ကဗျာလိုလှတဲ့ ပန်းပွင့်၊ သစ်ရွက်
အရှင် .. သခင် ..
မင်းကို စောင့်ဖို့ ငါအသက်ရှင်တယ်။
သစ်ပင် ၊ တောတောင် ၊ နေရောင် ..
အို .. အမျိုးကောင်းသားတို့
ကြယ်ပွင့်တို့ကို နွံ၌နစ်စေသူ ..
ချစ်ခြင်း ၊ မုန်းခြင်း ၊ ဥပက္ခောနှင့် ခံယူမှု
မြင်သူတိုင်းအား အကြည့်ဖြင့်သိမ်းပိုက်သူ .. ။
“ ခုနှစ် ”
အို .. ချစ်သူလုံမ
ငါမြတ်နိုးသူ .. ငါ့အား ..
ဖဲကျဉ်ခွင့်ရစေပါ။ ငါ့အား ..
ဆိုခွင့်ပြုပါ ၊ ထိုအခါ ..
“ ရှစ် ”
မြစ်တစ်စင်းမှာ သူ .. ငါ ..
ပြုစုသူမဲ့ပေရဲ့ .. ။
သည်သို့ .. သံသရာရှိလျှင်အဆုံး၊ ငါမို့ဖြစ်ရင်း
ချစ်ခြင်းအပ မြဲစေ ..
အို .. နတ်ဘုရားတို့ ။
အို .. ပိုင်ဆိုင်သူတို့ ။
Posted by ချမ်းလင်းနေ at 9:32 AM0comments
Posted by ချမ်းလင်းနေ at 9:31 AM0comments
အနာဒိအနန္တမေတ္တာရှင် “ ချစ်သော မေမေ ” သို့ ...
ထက် “မြ” သော မြားတစ်စင်းတည်၏။
သို့သော် “တေး” မရှိ။
ချို ”မြ” သော စောင်းတစ်အိုးတည်၏။
သျှပ်မှူးကျော်၊ မောင်မိုးကျော်၊ အရိုင်းဖြူ
Posted by ချမ်းလင်းနေ at 9:28 AM0comments
ကျွန်တော်လက်ရှိ အလုပ်လုပ်နေသော မြို.လေးအကြောင်းရေးချင်လို့ပါ။ဒီမြို့ ကလေးကို ကျွန်တော်စရောက်တော့၂၀၀၃ခုနှစ်လောက်ကပါ။အဲဒီနေ့ကလေးကို အခုထိတိုင်အောင် သတိရနေဆဲပါ။ ရန်ကုန်ကစထွက်တော့ မနက်၇နာရီခွဲလောက် တော့ရှိနေပြီ။ထိုင်းရောက်တော့ ၈နာရီခွဲ၉နာရီ ပတ်ဝန်းကျင်၊ လေယာဉ်ကပြန်ထွက်မှာက ထိုင်းစံတော်ချိန် ညနေ၄နာရီမှာဖြစ်လို့ အချိန်အတော်များများရပါတယ်။အဲဒီတုန်းက ထိုင်းလေဆိပ်က အဟောင်းပဲရှိသေးတယ်။ပထမဆုံးရောက်ဖူးတာဆိုတော့ မြင်သမျှမရာတွေက ကျွန်တော့်အတွက် အဲဒီအချိန်မှာ အထူးအဆန်းတွေချည်းပဲ (တောသားမြိုတက်လာသလိုပေါ့)။ညနေ ၄နာရီကျတော့ ရန်ကုန်ကစီးလာသလို လေယာဉ်သေးသေးလေး မဟုတ်တော့ပဲ ဘိုးရင်းအမျိုးအစားTG-517လေယာဉ်အကြီးကြီးကိုစီးပြီးထိုင်းမှထွက်ခွာပါသည်။ လေယာဉ်ပေါ်မှာ၆နာရီကျော် ကြာအောင်တမေ့တမောစီးလာခဲ့ပြီးနောက် ဒေသစံတော်ချိန် ည၁နာရီ (တကယ်တော့နံနက်၁နာရီပါမှာထိုမြိုလေးသို့ဆိုက်ရောက်ပါတယ်။
လေယာဉ်ပေါ်ကနေ ကြည့်လိုက်တော့ ကုလားမီးထွန်းပွဲကျင်းပနေသလား အောက်မေ့ရတယ်။မီးတန်းများ တန်းစီလင်းလို့ ထိန်ထိန်လင်းနေတဲ့မြိုလေးတစ်မြို ကိုစတင်တွေ့ရှိရပါတယ်။လေယာဉ်ပေါ်ကနေ စထွက်လာတော့ မိမိနားမလည်နိုင်သော ညိမ့်ညောင်းလှတဲ့ဘာသာစကားတစ်မျိုးရဲ့ အဆက်မပြက်လွှင့်ထုတ်နေတဲ့အသံတွေကို စတင်ပြီး ကြားရပါတော့တယ်။ ရန်ကုန်ကစထွက်လာကတည်းက စဉ်းစားလာတဲ့ ဒီမြို့လေးက အထင်နဲ့တကယ်လက်တွေ တခြားစီပါပဲ။နေရာတကာ သစ်လွင်တောက်ပနေတဲ့ဒီမြို့လေးရဲ့ လေယာဉ်ဆိပ်နဲပင် ဒီမြိုလေးရဲအဆင့်အတန်းကို ခန်မှန်းသိရှိနိုင်ပါတယ်။လေဆိပ်ကထွက်လာတော့ ပူနွေးလှတဲ့လေပူလေနွေးတို့က ကျွန်တော့်ရဲမျက်နှာကို အတားအဆီးမရှိ ပွေ့ဖက်ကြိုဆိုပါတယ်။နောက်မှသိရတာက ကျွန်တော်ရောက်တဲ့ သြဂုတ်လက ဒီမြိုလေးရဲ့အပူချိန်အမြင့်မားဆုံးအချိန်တဲ့ဗျာ။ရေနွေးငွေနဲ့ ပေါင်းခံနေသလိုပါပဲ။
ကဲသင်တိုဒီလောက်ဆို ဘယ်လိုမြိုဆိုတာ ခန်မှန်းရလောက်ပြီပေါ့။အဲဒီမြို့လေးက ကန္တာရတိုင်း ရွှေမဲထွက်တဲ့နိုင်ငံများထဲက ရွှေမြိုတော်တစ်ခုဖြစ်တဲ့ ဒူဘိုင်းပါ။ဒူဘိုင်းဟာ အာရပ်စော်ဘွားများ ပြည်ထောင်စုမှာပါဝင်တဲ့ ဒုတိယမြိုတော်ဖြစ်ပြီး အစောဆုံးတိုးတက်ဖွင့်ဖြိုးသော ခေတ်မှီမြို့တော်မော်ဒန်စီးတီး(MordanCity)ပါ။အာရပ်စော်ဘွားများပြည်ထောင်စုသည်
အာရပ်ကျွန်းဆွယ်(Arabian Peninsula)ရဲ အရှေမြောက်ဘက်ကမ်းတွင်တည်ရှိပြီး ဆော်ဒီအာရေဗျ(Saudi Arabia)၊အိုမန်(Sultan of Oman)နိုင်ငံများနှင့် နယ်နမိတ်ထိစပ်နေသောအာရပ်ပင်လယ်ကွေ့ (Arabian Gulf)နှင့်အိုမန်ပင်လယ်ကွေ့ (Gulf of Oman)အကြားကမ်းခြေဒေသဖြစ်သည်။
၁။ အဘူဒါဘီ Abu Dhabi
၂။ ဒူဘိုင်း Dubai
၃။ ရှာဂျား Sharjah
၄။ အာခ်ျမာန် Ajman
၅။ အမ်အာကွီဝမ် Umm Al Quwian
၆။ ရပ်ဆဲလ်ခိုင်းမား Ras Al Khaimah
၇။ဖူဂျားရား Fujairah (မြို့တော်များကိုအစဉ်လိုက်စီထားတာပါ။ မြန်မာလိုအသံထွက်ကိုအဆင်ပြေအောင်ထွက်ထားတာပါ။သည်းခံပြီးဖတ်ပေးကြပါခင်ဗျား။)
AbuDhabiကနိုင်ငံတစ်ခုလုံးဧ။်၈၀ရာနှုန်းခန်ဧရိယာစတုရန်းကီလိုမီတာပေါင်း၃၈၈၅ရှိသောပထမအကြီးဆုံးရုံးစိုက်ရာမြို့ တော်ဖြစ်ပါသည်။ဒူဘိုင်းကတော့ စီးပွားရေးအချက်အချာကျသော ဒုတိယမြိုတော်ဖြစ်ပါသည်။ ရာဇ၀င်အရဒူဘိုင်းဟာ ဘီစီ၃၀၀၀ခန့်ကစပြီး ပါရှန်ပင်လယ်ကွေ့အတွင်း ကုန်စည်ဖလှယ်ရာ အရေးကြီးသောဆိပ်ကမ်းမြို (KindomofSumer)မှ စတင်ခဲခြင်းဖြစ်တယ်လို့ အာရပ်သုတေသီများက ဆိုထားပါသည်။အဲဒီမြိုတော်ကြီးဟာ ယူဖရေးတီး(Euphrates)နှင့် တိုက်ဂရစ်(Tigris)မြစ်နှစ်စင်းကြားတည်ရှိခဲ့သော စီးပွားရေးဖွံဖြိုးသော မြိုတော်ဖြစ်ပါသည်။ဒူဘိုင်းဟာ ဗြိတိသျှကိုလိုနီအဖြစ် ၁၈၉၂မှာရောက်ရှိသွားပြီး ၁၉၇၁မှစ၍ လွတ်လပ်သော အာရပ်စော်ဘွားများ ပြည်ထောင်စုအဖြစ် ပြန်လည်ရပ်တည်နိူင်ခဲ့ပါသည်။ ၁၉၇၁အစတွင်အာရပ်စော်ဘွားများပြည်ထောင်စုမှာစုစုပေါင်း ၆နိုင်ငံသာရှိပြီး ၁၉၇၂ရောက်မှRasAlKhaimah၀င်ရောက်လာပြီးအားလုံးပေါင်း၇နိုင်ငံဖြစ်လာသည်။အုပ်ချုပ်မှုကို မြို့ တော်အလိုက်ဟု Sheik(ရှိတ်ခ်) ခေါ်သောစော်ဘွားသူဌေးများက ခေါင်းဆောင်အုပ်ချုပ်ကြသည်။ ဥပဒေကိုမြိုတော်အလိုက် အနဲငယ်ကွဲပြားမှုရှိပြီး ခုနှစ်ပြည်ထောင်အတွက်တူညီတဲ့ဥပဒေရှိပါသည်။
Posted by ချမ်းလင်းနေ at 1:25 AM0comments
Labels: စုံစီနဖာ, ဆောင်းပါး